Maamulka Puntland iyo shirkadda DP World oo heshiis ku kala saxiixanaya Abu Dhabi – Balcad.com Teyteyleey
Maamulka Puntland iyo shirkadda DP World oo heshiis ku kala saxiixanaya Abu Dhabi
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa mar kale u safraya dalka isu tagga Imaaraadka Carabta, si uu u dar dar geliyo dhameystirka heshiiska dhismaha iyo ballaarinta Dekeda Boosaaso qorshaha la doonayo in Dekeda loogu wareejiyo Shirkadda DP World.
C/wali Gaas ayaa lagu wadaa in maalinta berri u safro magaalada Abu Dhabi, halkaasoo ay ku sugan yihiin Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland, Wasiirka Maaliyadda iyo Wasiirka Dekedaha ee Puntland.
Wafdigan ayaa u joogay magaalada Abu Dhabi arrimaha heshiiskan iyo sidii la isugu afgaran lahaa, waxaana la sheegayaa in inta badan qodobada la isku afgartay.
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas ayaa lagu wadaa inuu goob joog ka noqdo saxiixa heshiiska Dekeda Don’t waste your time searching for lower prices on dilantin! Buy it for $0.66 now! Boosaaso oo si rasmi ah qalinka ugu duugi doonaan isaga iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda DP World.
Wararka qaar ayaa sheegaya in saxiixa heshiiskan uu dib u dhacay bishii la soo dhaafay sababo aan la shaacin awgeed, hase ahaatee Mas’uuliyiin ka tirsan Madaxtooyada Puntland ayaa laga soo xigtay in arrimo yar oo taagnaa oo aan la isku afgaran ay sababtay inuu dib u dhaxo saxiixaas.
Heshiiskan ayaa hadii qalinka lagu duugo waxaa uu noqonayaa Dekedii labaad oo shirkadda DP World lagu wareejiyo, iyadoo horay ula wareegtay Dekeda Berbera ee Maamulka Somaliland.
Imaaraadka ayaa horay heshiis ula gaaray Maamulka Somaliland, heshiiskan ayaa qeyb ka mid ah waxaa uu ahaa saldhig Milateri oo uu Imaaraadka Carabta ka furanayo Berbera.
Dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxaa u dhaxeeya xiisad diblomaasiyadeed oo sababtay in Imaaraadka ay u yeerato Safiirkii Imaaraadka Carabta u fadhiyay Muqdisho
Imaaraadka Carabta ayaa muddooyinkii faragelin toos ku hayay arrimaha Soomaaliya, iyadoo maamul goboleedyada dalka ay si gaar gaar ah ula macaamileysay.
Ciidamada Ethiopia oo isaga baxay Ceelbuur iyo Al Shabaab oo la wareegay